Miverina ao amin'ny Gnome i Debian ho ny tontolon'ny Desktop misy anao? | Avy amin'ny Linux
Toa a fanoloran-tena nataon'i Christian perrier manamafy izany Debian hampiasa indray GNOME como el Tontolo iainana Desktop amin'ny toerana misy anao, na dia nitady be aza aho dia mbola tsy nahita naoty ofisialy izay manamarina io fanapahan-kevitra io.
Amin'ny lafiny iray dia ho azoko hoe Debian dia fizarana ireo izay natokana hanome ny mpampiasa traikefa mitovy amin'ilay nomena Linux Mint o Ubuntu, Saingy tsy izany no izy.
Aleo tadidintsika fa ireo mpamorona ny GNOME fahazoan-dàlana hampiasa Xfce ho solon'ny kinova 3.8, indrindra rehefa mamafa ny session fallback. Raisina ny isan'ny maritrano izay Debian fanampiana ary mety hifanipaka izany LLVMpipe, Tsy azoko io fanovana vaovao io.
Na dia amin'ny tena fiainana aza, raha dinihintsika ny fihodinan'ny fampandrosoana Debian, Heveriko fa ho avy indray ny tranon'omby manaraka (izay misalasala aho) amin'ny Gnome 3.6, ka hisy fotoana hampiahiahy ireo zavatra ireo any aoriana. Raha manontany ahy ianao dia hoy aho Debian afaka mampiasa kanelina alohan'ny Akorandriaka gnome como el Tontolo iainana Desktop ary miharihary ny antony.
Misy antsipiriany hafa tsy azoko. Inona no hataon'izy ireo GNOME dia hifanaraka amin'ny CD Installation Debian Wheezy?
Saingy ny fanilihana an'io, ny vaovao dia tsy mahasosotra ahy mihitsy, satria heveriko fa manana izany Xfce 4.8 default amin'ny Wheezy tsy dia hahasoa tanteraka, na dia tsy dia fantatra loatra aza fa hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa, dia mety kokoa raha hampiasaina Xfce 4.10.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Miverina ao amin'ny Gnome i Debian ho ny tontolon'ny Desktop misy anao?
Tsia, efa navotsotra ny wheezy debian, ka tsy hanaiky fanovana kinova izy ireo raha tsy amin'ny tranga tena tsy fahita firy. Debian wheezy dia hanana gnome 3.4.x rehefa lasa marin-toerana ...
Na izany aza, ekeko fa ny distro izay manohana maritrano marobe marobe dia manana ny biraony lehibe indrindra izay mitaky fanafainganana horonantsary fitaovana dia hadisoana ...
Tsy nahavita nametraka debian gnome stable avy amin'ny cd tsy misy tamba-jotra ianao nandritra ny fotoana elaela, heveriko fa tsy hiova izany izao. Mikasika ny xfce 4.10, tsy misy dikany ny nanakanan'izy ireo azy tsy hiditra amin'ny wheezy.
Mariho fa rehefa mampiasa 3.4 dia misy tombony roa: Ny Nautilus dia mbola tsy very asa maro ary ny Gnome Fallback dia voatahiry mandritra ny fotoana lava ho an'ireo izay tsy manana haingam-pandeha.
Manaiky aho fa ny dikanteny marina tazonina dia ilay 3.4 voasedra indrindra.
tsy mandray gnome izany satria tsy nijanona mihitsy….
niainga tamin'ny tsaho ianao ary namoaka vaovao ho marina nefa tsy nanamarina izany.
Hatramin'ny nivoahan'ny vaovao sandoka dia namoaka betezy betezy 3 i debian izay samy nitondra ny gnome ho toy ny birao misy anao ny mpiorina netinstallera sy ny cd.
Ankoatr'izay, i Stefano Zacchiroli tenany (mpitarika ny tetikasa debian ankehitriny) avy amin'ny kaonty mitovy aminy dia nandà ny tsaho.
adala satria mora idirana ireo olona ireo, mahafantatra anglisy kely ifotony fa afaka mandefa Tweet na mailaka aminao izy ireo ary tsy manana olana mamaly ireto tovolahy ireto. fa tsy hoe satria mora kokoa ny mamerina toy ny boloky ny honohono fa ny hafa efa miverina toy ny boloky
Tsy misy olona miankina amin'ny honohono Rolo. Amin'ireo lahatsoratra rehetra azonao jerena ato amin'ity bilaogy mifandraika amin'ilay lohahevitra ity dia voalaza fa avy aiza ilay "tsaho" araka ny iantsoanao azy. Raha tianao dia azonao atao ny mamaky azy io Tsaho1 | Tsaho2
Ny lesoka nataonao sy ireo mpamaham-bolongana maro hafa dia ny fandraisana hevitra na hevitra ho zava-misy fa tsy hanamarina izany
Manome ahy loharanom-pahalalana roa avy amin'i Joey Hess izay mpamorona Debian ianao
Ny iray natao tamin'ny 8 Jolay 2012 http://joeyh.name/blog/entry/debian-cd_work_at_DebCamp/
Ary ny iray hafa avy ao amin'ny 28 Jul 2012 http://anonscm.debian.org/gitweb/?p=tasksel/tasksel.git;a=commit;h=2a962cc65cdba010177f27e8824ba10d9a799a08
fa raha nanadihady kely izy ireo (jereo ny vaovao) dia ho hitany fa:
namoaka i debian:
03-Aog-2012 ny beta 1 an'ny wheezy misy cd1 gnome toy ny amin'ny netinstall http://cdimage.debian.org/cdimage/wheezy_di_beta1/
09-Sep-2012 ny beta 2 an'ny wheezy misy cd1 gnome toy ny amin'ny netinstall http://cdimage.debian.org/cdimage/wheezy_di_beta2/
19-Oktobra 2012 ny beta 3 an'ny wheezy misy cd1 gnome toy ny amin'ny netinstall http://cdimage.debian.org/cdimage/wheezy_di_beta3/
ireo beta ireo dia taorian'ny fanehoan-kevitr'i Joey Hess ary nandà mazava tsara fa xfce no cdian debian, izany hoe tsy nisy fotoana akory xfce ny debian desktop debian cd1
fa toy ny hoe tsy ampy izany dia i Stefano Zacchiroli ihany http://es.wikipedia.org/wiki/Stefano_Zacchiroli nolaviny tao amin'ny kaontiny identica ilay olana http://identi.ca tamin'ny 30 Aogositra 2012, miresaka lahatsoratra gnome mitsikera izay voalaza ao fa xfce no biraonao default amin'ny debian http://identi.ca/notice/96386955
«Http://ur1.ca/a22vo afaka mijanona ve ny olona milaza fa nanova ny tontolon'ny birao misy anao? Makà sary #Wheezy dia ho hitanao irery #kthxbye »
izany no tiako holazaina amin'ny fanamarinana vaovao
Andao hojerena, Joey hess miadidy ny CD fametrahana Debian (Tsy fantatro izay antsoinao hoe toerana tena anananao)Noho izany, tsy heveriko ho tsaho akory ny fanehoan-kevitra azony atao, ary koa rehefa nahita ny Debian GIT Commitite aho, nahoana aho no hieritreritra fa sandoka izany ary tsy maintsy hivoaka hanadihady izany? Ity dia bilaogy noforonin'ireo voanjo solosaina roa, fa tsy mpanao gazety 🙂
Miombon-kevitra amin'i Elav aho. Azo antoka fa tsy tsaho izany, vaovao avy amin'ny loharano azo antoka. Tsy mila porofo tsy azo lavina ilay vaovao, toy ny hoe fitsarana io. Manolotra antsika ny naoty sy ny loharano niavian'izy ireo, noho izany dia tsy maharikoriko izany. Na izany na tsy izany dia i Joy Hess no tompon'antoka tamin'ny fisavoritahana satria izy, izay maha izy azy, dia tsy maintsy refesina ny teniny.
Hatramin'ny fanehoan-kevitr'i Joey Hess (volana vitsivitsy dia volana vitsy izao) Tsy mbola nisy fanambarana ofisialy avy amin'ny debian momba izany. Tsy ampy ve izany ny mampiahiahy? Ny tiako holazaina dia ... fiovan'ny habe ary tsy misy fanambarana ofisialy toa hafahafa, sa tsy izany?
isam-bolana dia nolavin'i Stefano Zacchiroli ilay tsaho (heveriko fa somary manan-danja kokoa izany, raha ny filazany ihany, satria Stefano no endrik'i Debian raha maharitra eo amin'ny toerany izy ary i Joey Hess dia mpamorona manan-danja), ankoatry ny betezy betezy rehetra (navoaka taorian'ny tenin'i Joey) asio gnome3 toy ny cd1 (mandeha amin'ny CD ny GNOME3) tsy ampy ve izany hanamafisana fa tsaho daholo izany?
Manontany tena aho hoe oviana ny tena fanamafisana fa xfce no default cd1 sahady
ny lohatenin'ny fanamarihana dia milaza fa "Debian dia mamerina an'i Gnome ho tontolo iainana Desktop default?" fa raha ny marina, ny gnome dia tsy nijanona mihitsy hoe ny biraonao banga amin'ny debian
Pavloco, hazavako fa efa tsy afa-bela tamin'ny tsy fomban'ny bilaogy izany, fa raha ny tena izy dia tsy maintsy zahana loharanom-baovao roa farafahakeliny ny tantara iray vaovao, nanaraka ny tenin'i Joey daholo izy ireo, saingy tsy nisy nitady loharano hafa (bilaogy hafa mamerina ny vaovao tsy loharano hafa). Ary izay lazain'i Joey fa tsy zavatra mazava 100%, dia toy ny fanehoan-kevitra na fanehoana faniriana noho ny zavatra hafa rehetra
rehefa tsy manara-maso ny mpanao gazety, izany hoe tsy manana filaminana izy ireo, miteny amin'ny mety xej: xfce no biraon'ny default amin'ny debian
Ary koa, rehefa afaka volana vitsivitsy dia efa maro ny famantarana ahatakatra fa tsaho fotsiny ny vaovao na tsy azo itokisana toa izany (mazava ho azy fa ny tsaho rehetra (araka ny RAE Voice izay mandeha amin'ny besinimaro) dia hitodika on dia mila manana zavatra verisimilitude)
Tantara ny lasa, ka tsy maninona na diso izany na tsia: B
Faly be aho amin'ny XFCE ary mieritreritra aho fa tokony hanao ezaka i Debian ary hampihatra ny xfce 4.10 izay amin'ny fizarana hafa dia efa tena milamina
Valiny amin'i MANUEL PEREZ
Iray monja (1) mpikirakira birao xfce amin'ny debian, novakiako tao amin'ny bilaogy ny antony tsy fampiasana xfce 4.10 http://www.linux-support.com/cms/yves-alexis-perez-debian-xfce-4-10-and-xfce-4-11/
Misy olona iray hafa miara-miasa fa mieritreritra aho fa tafiditra bebe kokoa amin'ny ubuntu izy.
Ny Gnome izay hivoaka dia 3.4
Tsy manan-javatra manohitra an'i Gnome aho, fa aleoko mampiasa Xfce.
Ny bibikely nananan'izy ireo dia tsy manavao ny 4.10 amin'ny fitsapana ara-potoana.
Ratsy loatra 🙁
Na dia isaky ny afaka manao izany aza aho dia hampiasa Net Install 😉
Amin'izao fotoana izao dia misalasala be aho fa hiova izy ireo, efa nambara i xfce ary tsy misy dikany ny fanovana
Misalasala ny amin'ny fahamarinan'ny vaovao aho
Aza adino fa any Debian dia mandray am-pitoniana tanteraka ny zava-drehetra izy ireo, tsy azo eritreretina izany
xfce dia tsy manohana tsara ny fanavaozana ny 4.6 ka hatramin'ny 4.10, noho izany antony sy antony hafa izany xfce 4.10 dia tsy nandalo wheezy. Tsy resaka fotoana io.
Izay no antony .. Ankehitriny, ny zavatra apetrako foana amin'ny tenako dia: Tsy azo atao ve ny mamorona mekanisma fifindra-monina? Tadidiko ny zavatra mitovy nitranga tamin'ny KDE, Tontolo iainana izay manana fonosana maro kokoa noho Xfce ary noho izany dia sarotra kokoa izany ary voavahan'izy ireo izany.
Lazao amiko Gnome, KDE, izay misy fonosana 50 mahery ary tsy miteny na inona na inona aho Fa Xfce? Raha esorinao ny Goodies dia tsy mahatratra 20 fonosana .. Tsy amin'ny fitsarana ny ezaka sy ny asan'ny mpamorona an'ny Debian, fa amiko tsy manana fialan-tsiny izy ireo.
Debian dia niavaka foana toy ny distro mitazona fonosana tsy misy patsa izay tsy natao hanamboarana bibikely.
Na dia mbola tsy nanandrana nitsara azy ireo aza ianao dia. Mieritreritra aho fa tsy mihevitra izany na kely aza ny andraikiny. Ary miombon-kevitra amin'izy ireo aho. Ary koa, raha ny tadiavinao dia fonosan'ny kinova farany amin'ny zavatra iray, tsy isalasalana fa diso ny distro.
Marcos, fantatro tsara ny fomba fiasan'izy io DebianEny, efa nampiasa an'ity distro ity nandritra ny taona maro aho. Raha ny tiako holazaina dia tsy te hitsara aho dia noho ny zava-misy tsotra fa tsy izaho no mitantana ny fotoana ananan'ny mpamorona, mazava ho azy fa mitsara ny fialan-tsiny tsy ampidiriny aho Xfce 4.10 ho an'ny olana fifindra-monina / fanavaozana, haveriko indray, rehefa nitranga izany KDE izay lehibe kokoa noho izany, hoy izy ireo.
Rehefa te hampiasa Xfce 4.10 en Debian, Nampiasaiko izy io. Nametraka azy io tamin'ny tanako aho ary noho io antony io indrindra no nitsarako azy kokoa, satria efa niasa aho Xfce 4.10 momba ny toe-javatra 4.8 ary tsy nanana olana aho.
Ny teboka dia mieritreritra aho fa mety misy script na rindranasa afaka manatanteraka ny fifindra-monina Xfce 4.6 a Xfce 4.10, na manao ahoana na manao ahoana ny fanaingoana ny tranomboky taloha miaraka amin'ireo vaovao. Saingy tsy manam-pahaizana aho, na tsy developer. Raha diso aho dia manitsy aho ary manisy fotoana.
Aza tezitra elav, tsy fikasako mihitsy ny mitsikera anao.
Hafa ny tranga KDE. Fa maninona Satria rehefa mivoaka toy ny milina ny fametahana dia tsy nisy mpanohana ofisialy ny kde 3.5.x. Ahoana no hahalalanao (Tsy misalasala aho fa fantatrao ny fomba fiasan'ny debian, saingy manamarika izay ianteherako amin'ny fanehoan-kevitra aho) i debian dia tsy mirona amin'ny fametahana rindrambaiko izay tsy voatazona. Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia namboarin'izy ireo ny shit nataon'i KDE, na novakian'izy ireo ny fametrahana ny mpampiasa ny KDE 3.5 na najanona ny fonosana KDE. Tsy nanana safidy firy izy ireo ...
Oad. Tezitra ve aho? Miala tsiny fa tsy fikasako izany .. Tsy ho tezitra amin'ireo mpampiasa miaro ny masonkareny aho ary diso ny hevitr'izy ireo na tsia. 😉
Iray ihany (1) ny mpihazona.
Miombon-kevitra amin'ilay hevitra etsy ambony aho: satria hitako ny tontolon'ny Kanelina (sy ny Nemo, vs ny Nautilus taloha), ary ny fomba mora nametrahana azy tamin'ny Wheezy-ko, ajanony ny Xfce sy ny akorandriaka: izany no tokony ho làlana.
Manontany tena aho hoe, rahoviana ny daty ofisialy na farafaharatsiny zavatra latsaky ny daty nanombohan'ny wheezy, tiako be izany, saingy tsy zakako ny miaina miaraka amin'ireo rindrambaiko efa lany andro. misaotra
raha ny fanontanianao dia rahoviana no hafindra i Wheezy amin'ny 'sampana marin-toerana', ny valiny nomen'i Debian dia mitovy foana: 'rehefa tonga ny fotoana anaovana azy'.
Fa raha, araky ny voalazanao fa tsy zakanao ny miaina miaraka amin'ny lozisialy efa antitra, tsy tokony hampiasa an'i Debian Stable ny anao, fa ny sampana fitiliana an'i Debian (izay misy an'i Wheezy ankehitriny) na, raha tena iharan'ny fanafihana ianao. ', ny sampan'i Sid (miovaova). Ary azonao atao izany amin'ny 'izao fotoana izao'. Mazava ho azy fa miankina aminao ny risika azonao (rangahy, ny fitsapana, mazàna dia "milamina", ara-dalàna izy io ary tsy mihantona matetika. Ary kely kokoa amin'izao fotoana izao, izay efa 'mivaingana', mandroso miorim-paka ao anatin'ny volana vitsivitsy)
ferchometal, debian wheezy dia hilamina rehefa vonona. Izany dia manondro ny zava-misy fa rehefa manana ny bibikely manan-danja voavaha izy ireo (izay fantatro fa mbola betsaka ny tokony halamina) dia ho azony atao ny mihevitra azy io ho ampy tsara hametrahana azy ao amin'ny sampana miorina. Mikasika ny rindrambaiko efa lany daty, dia mamporisika anao aho hanandrana ny solusos eveline (na oviana na oviana ny kinova 1.3 dia mivoaka miaraka amina installer sy zavakanto vaovao) ... mifototra amin'ny famerenan'i debian, ny developer (Ikey Doherty, ex Linux Mint) dia nanavao fonosana manan-danja maro (oh. rhythmbox, firefox, thunderbird, mpamily nvidia, flash, ny kernel, vlc, devede, sns). Ankoatr'izay, mamono tena izy mba hanome fiainana vaovao 2 ...
Izaho manokana dia tsy nino ny Gnome 3, fa ny iray izay andramako azy dia tiako izany raha rehefa hitako fa tsy hitondra azy io intsony amin'ny kinova 7 dia nametraka openbox aho ary tena tiako fa tsy novaiko ho an'ny hafa
Valiny tamin'i Karlos
Ao amin'ny bilaogy libuntu dia vakio ity na dia tsy mitanisa ny loharano aza izy ireo http://libuntu.wordpress.com/2012/11/13/erich-schubert-hay-que-migrar-de-gnome-3-a-xfce-lo-mas-pronto-posible/
Ity ny loharano
Ny loharano tany am-boalohany (raha te hahalala bebe kokoa momba an'ity Erich ity ianao):
Ratsy any debian, nomeny ahy foana ny fahatsapana fa miaina izany manome fahafinaretana an'i Gnome sy FSF. Ny tena izy dia ny Gnome 3 no nanjary safidy ratsy indrindra teo amin'ny birao, saingy toa tsy misy olona te hahatsapa izany.
Heveriko fa tsy misy mahatsikaritra. Ny mifanohitra amin'izay no izy. Manana tetikasa maro ianao izay maniry ho solon'ny gnome. Ohatra, manana solusos DE tiako ianao (mbola tsy manana anarana ofisialy izy io, amin'ny ankapobeny dia ny fampifanarahana fitaovana marobe sy tontonana gnome 3.0-3.6 izany ka toa ny tontolon'ny gnome an'ny 2.32, dia ho hitany ny jiro. rehefa mivoaka solusos 2.0 dia inoana fa alohan'ny antsasaky ny taona), firaisankina, kanelina, vady, hilazana ireo zava-dehibe indrindra. Ny olana, araka ny eritreritro, dia ny hoe tsy hitan'ny fiarahamonina NY fanoloana farany, ka ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mitsambikina avy eo amin'ny birao iray mankany amin'ny iray hafa na mampiasa iray izay tsy dia mahazo aina loatra.
Fantatra fa ny debian (na ny mpitarika azy aza) dia manana fifandraisana be dia be amin'ny FSF sy ny tetikasany (toa an'i Gnome, Hurd). Na dia talohan'ny nivoahany aza dia nesorina ny debian 6 (ireo ampahany tsy misy karama an'ny kernel) ary ankehitriny ao amin'ny debian 7 misy "torohevitra" hanalana na hanamorana ny fidirana amin'ny tahiry tsy maimaimpoana ho sarotra kokoa ny hiditra ny lisitra FSF (http://lwn.net/Articles/505085/) ary firmwares tsy maimaim-poana (https://blog.desdelinux.net/firmware-la-pesadilla-continua/). Tsy fantatro izay nisy.
Tiako ny hifindra amin'ny XFCE ry zalahy Debian, satria hanome fisondrotana lehibe ity tontolo birao ity, mampiasa Xubuntu aho ary faly aho fa manana ny zava-drehetra (hafainganana, tontolo iainana gnome, fitoniana ary hatsaran-tarehy), inona koa Fantatro ve? mety hanontany ianao, tadidio fa Distro reny i Debian, noho izany ireo distros hafa mifototra amin'izany dia mety handray XFCE bebe kokoa amin'ny kinova ho avy.
Heveriko fa tsy manana ny fahamatorana takiana ny XFCE, ny tena izy dia tontolo misy tsy fahampiana marobe, na dia androany aza dia tsy nahatratra ny Gnome 2.3 ary betsaka ny azo lazaina, efa ao amin'ny kinova 3.6.2 isika ary manisa .
Ny KDE dia mety ho safidy raha toa ny fomba fanaonao tsy toa hoe vaovao ao anaty boaty serealy. Niampy an'izay, be loatra ny KDE. Ny farafahakeliny farafahakeliny dia kely noho izany ary mbola tsy nianatra ny lesona azony ny KDE. Tsy milaza aho hoe tontolo ratsy izy io fa amin'ny fahavitrihany ho latabatra tsara dia tsy miraharaha ny fampiasana. Ny lafiny tsotra toy ny mariky ny loko, ny rohy mivantana ary ny fanaovana sary an-tsaina tsara kokoa dia mihoatra ny ilaina mba handaminana antontan-taratasy. Tsy nisy feso feso izay manana bokotra betsaka napetraka teo alohany.
Mihoatra ny KDE ary mahantra ny XFCE.
Raha ny hafainganana dia ny fanafainganana sary, avy eo havaozy tsotra izao, dia toa tsy mitombina fa ny solosaina amin'ny taonan'ny lasopy dia fetra, na dia marina aza fa mahery ny GNU / Linux, tsy hitako izay ilàna azy hitantanana azy. Celeron amin'ny 700 mhz, izay efa feno 20 taona aho. Amboary ho duo fototra 2 farafahakeliny. Na ny PUPPY sy ny SLAX aza dia manomboka mangataka fitakiana ambony kokoa. TSY MAINTSY HANOHANA NY MPANDROSO NY FIAINANA 30 TAONA FANARITO.
Farany, tsy ampy ny Gnome-shell, tokony hiasa amin'izy ireo avy hatrany ianao, saingy tsara fa manohana ireo tetikasa ireo i Debian izay efa vato fehizoro hatry ny ela. Androany dia miresaka momba ny Cinamong, Unity, sns ... izy ireo mihazakazaka eo ambanin'ny Gnome ka i Gnome no mbola safidy.
Manana Thinkpad T410 aho ary Ubuntu Gnome Remix dia tsara ho ahy. Tsy izaho intsony no tanora afaka milalao azy mandritra ny alina isaky ny mametraka ARCH na FREEBSD aho. Tsy anio aho dia aleoko zavatra milamina sy ankehitriny ary afaka mampianatra Linux an'ireo mpianatro. Profesora ao amin'ny UNAM aho
Miankina amin'ny fijerin'ny mpampiasa azy izany. Raha tsorina Xfce 4.10 tsy manana zavatra hitsiriritana an'i Gnome2, ary ny zavatra tokana tsy ampy raha ampitahaina aminy Gnome 3 Gtk3 io .. Azo antoka fa betsaka koa ny fitaovana sy ny safidy ao amin'ny Gnome izay tsy ananan'i Xfce, saingy averiko ihany, miankina amin'ny mpampiasa no mijery azy.
About Wiki KDE, Azoko lazaina ihany fa chameleon izy, mampifanaraka ny fiasa toa izay Gnome, firaisana, kanelina, Xfce... ary heveriko fa tsy misy amin'izy ireo afaka ampifanarahana amin'ny asany KDE.
Ny tokony horaisinao dia ny fahamatorana. I Debian dia tsy tokony hamela ny fahatapahany toy izany.
Ary mpampiasa Debian iray no miteny an'io. 🙁
Manantena aho fa i Debian dia manana ny KDE ho biraonao tsy misy toerana…: l
Antenaina. Nanandrana ny KDE tao Wheezy tamin'ity herinandro ity ary nianjera roa.
Zahao ity http://anonscm.debian.org/gitweb/?p=tasksel/tasksel.git;a=summary ary jereo ny fanoloran-tena farany mba tsy hijaly intsony ny mpanohitra anti-gnome na xfce, satria xfce no tontolo iainana tsy miova (indray).
Btw, nisioka ity antsipiriany ity aho nanomboka omaly (Ahoana ny fomba ahazoako mpanaraka)
Teo no nanomezanao azy ireo !! 😛
Nanaraka ny fananganana isan-kerinandro sy ny betas isan-kerinandro aho, ary mbola tsy nahita xfce natao ho laharam-pahamehana, mitohy toy ny mahazatra hatrany, amin'ny faran'ny lisitry ny sary miaraka amin'ny lxde sy cd kde hafa. Tsy hiova ho gnome intsony izy satria tsy mbola niova tato anatin'ny volana maromaro. Na izany na tsy izany, niezaka hatrany nanaraka ny marimaritra iraisana i debian, fa tsy fanapahan-kevitr'olon-tokana toa ny distro hafa, ary toa tsy hitan'ireo mpikirakira sary mihitsy izay "noheverin'i Joey Hess". Ny tena marina dia tsy tafiditra anaty cd ny Gnome 3, ny cd voalohany raha tsy manana Internet ianao dia tsy mametraka tontolon'ny sary, tsy haiko ny manamboatra an'io
Marito antoka fa nanana olana ianao na sendra bibikely ary izany no antony tsy fanananao tontolo iainana sary, mariho fa ao amin'ny lisitry ny fonosana cd1estam ny xorg, gdm3 ary gnome
Rolo, efa nanandrana ireo isan-kerinandro aho, fa rehefa ataoko ny fametrahana tsy misy Internet (mba tsy hametrahana gnome feno) rehefa miseho ilay taskel dia toa tsy miseho ny "tontolon'ny birao debian" dia mety efa namboarin'izy ireo tamin'ny beta 3 aho. handeha hizaha toetra azy
Satria manaitra ny fahalianana ny lohahevitra, misy olona avy amin'ny Linux na bilaogy iray hafa, izay mahay anglisy, dia afaka mandefa mailaka amin'i Joey Hess ary maninona i Stefano Zacchiroli no manontany azy ireo ny momba ny xfce ho biraonao tsy misy toerana.
Heveriko fa tsy hanana olana amin'ny famaliana na amin'ny fanazavàna zavatra ireo olona ireo
Hevitra tsara .. 😉
Mitandrema amin'izany Ernesto izany ... Eritrereto fa tsy ianao irery no mametra-panontaniana momba ireo olana ireo, noho izany dia manolo-kevitra aho alohan'ny hanoratako hanoratra mba hijerenao raha mbola tsy nandidy momba izany ny komandà ambony Debian.
Misy zava-baovao misy, dia ny nanasaraka ny tontolo xfce an'ny lxde fametrahana cd.
Fametrahana Debian 6 tsikelikely